Igosa: I-5G inguqulelo yeHuawei P30 ayizukukhutshwa | I-Androidsis
Izolo ukuphela kwesiphelo seHuawei kufike ngokusemthethweni, kunye neHuawei P30 kunye neP30 Pro, esele sikuxelela yonke into. Ukongeza ekubeni nakho zizame ngoku ngokusemthethweni. Emva kokuboniswa okufanayo, kuye kwavela amathandabuzo malunga nokuba kuya kubakho inguqulelo yesi siphelo siphezulu nge5G. Yinto esiyibonileyo ezinye iimveliso ze-Android zisenza. Kodwa uphawu lwesiTshayina aluthethi nto kwintetho.
Nangona kungakhange silinde ixesha elide de sifunde ngakumbi. Kungenxa yokuba iyinkampani ngokwayo eqinisekisile ukuba ayizukubakho ingxelo ye5G yosapho lweHuawei P30. Ukongeza ekunikezeni izizathu zokuba kutheni kunje.
Njengoko sele sazi, Iziseko zophuhliso ze5G azikakulungeli namhlanje kumazwe amaninzi. Kwimeko yeSpain kufuneka linda de kube ngunyaka olandelayo, njengoko kusenzeka kumazwe amaninzi eYurophu. Ke ngoko, njengoko inkampani isitsho, iinethiwekhi azikakulungeli okwangoku. Ke ayinangqondo.
Ngoko ke ayenzi ngqondo ukumilisela imodeli ngaphakathi kuluhlu lweHuawei P30 ene5G. Nangona ngandlela thile, oku kuyaphikisana nento ebonisiweyo, kuba kufuneka sikhumbule ukuba iMate X yayo sele iza nenkxaso yenethiwekhi ye5G. Ke kuyamangalisa ngandlela ithile.
Ke ngoku kuya kufuneka silinde ukuze sibone ezinye iimodeli zohlobo kunye ne5G. Kuba iHuawei P30 ayizukufumana le nkxaso, kulindeleke ukuba Uluhlu lweMate olusungulwa ekwindla ewe ndizakuba nayo. Kodwa le yinto ekusele ukuba ihambe ixesha elide. Ngokuqinisekileyo kwiinyanga ezimbalwa siza kuba nexesha.
Okwangoku, Ezinye iimveliso zineemodeli ze5G eziya kuthi zifike kwintengiso kungekudala. Omnye wabakhuphiswano abakhulu bezi Huawei P30, I-Galaxy S10 eza kufika kule nyanga ka-Epreli kuxhomekeke kwintengiso. Siza kubona ukuba ukuthengisa kwezi modeli kuguquka njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iqinisekisiwe: Ayizukubakho ingxelo ye5G yeHuawei P30